तेह्रथुमको छथर गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय शुक्रबारेले गरेको महत्वपुर्ण १० केहि उपलब्धि र कार्यन्वयनमा रहेका याेजनाहरु पत्रकार सम्मेलन गरि शुक्रबार सार्बजानिक गरेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष सन्तवीर लिम्बुले स्थानिय सरकारको पक्षमा दृढताकासाथ पैरवि गरिरहेको समेत जानकारी गराउँदै सो उपलब्धि सार्वजनिक गरेकाा हुन् । समृद्ध र सवल छथर गाउपालिका निर्माण गर्न जग वसाल्ने ऐतिहासिक अवसरका लागि सम्पूर्ण छथरवासीलाई पालिकाले आभार व्यक्त गरेको छ । छथर गाउपालिकाको परम्परागत पेशा, ब्यवसाय, कृषि, अन्य आर्थिक सामाजिक सास्कृतिक धार्मिक आस्थाहरुसग जोडिएका र पहिचानमा रहेको पर्यटकीय स्थलहरुलाई संरक्षण प्रवद्र्धन र ब्यवसायिकरण गरी छथरे जनताको जिविकामा सहज बनाउँदै समृद्ध छथर निर्माणको जग बसाल्ने थालनीको रुपमा निर्वाचित भएको मितिबाटै अनवरत रुपमा काम अध्यक्ष लिम्बुको भनाइ छ ।
छथर गाउपालिकाले खानेपानी कार्यक्रमलाई पहिलो उपलब्धि मानेको छ । ६ वटा वडाहरु मध्ये तमोरले छोएका वडाहरु डा नंं. ३,४ र ५ का सुख्खा ग्रस्त क्षेत्रमा चरम खानेपानिको अभाव थियो । सो अभावले बसाई सर्ने बाध्यात्मक परिस्थीतिको हल गर्दै तेलिया खानेपानी योजना, पहरे खानेपानी योजना संचालन भई तत्काल खानेपानी आपुर्ति भई रहेको र वडा नंं. ५ र ६ को हकमा ढाडखोला खानेपानी योजना संचालनको क्रममा रहेको र अन्य खानेपानि योजनाको ब्यावस्थापन गर्ने योजनालाई पहिलो उपलब्धि मानेको हो । पालिकाले विवाह, ब्रतबन्ध, सुध्याईलगायतको सामाजिक सामुहिक कार्यमा निःशुल्क ५ हजार लिटर पानि टयांकर मार्फत सेवा दिने कार्य थालनी पनि गरेको छ ।
गाउपालिकाको मुख्य सडक सिधुवा शुक्रवारे सडक वर्षातको समयमा सवारी साधन आवतजावत गर्न नसक्ने अवस्थामा थियो । बाह्रैमास सवारी साधन संचालन हुने अवस्थामा रहेको र कालोपत्रे सडक निर्माणका लागि टेण्डर भई कार्य प्रारम्भ भएको अवस्था छ । मापदण्डमा आधारीत सडकहरु वडा जोड्ने सडकहरुलाई अलवेदर बनाउने कार्य भईरहेको र गाउपालिका चक्रपथ निर्माण भईरहेको छ । पालिकाले सडकमा गरेको उपलब्धिलाई दोस्रो उपलब्धि ठानेको छ ।
१० उपलब्धि र कार्यन्वयनकाे अबस्था
१, छथर गाउपालिकाको ६ वटा वडाहरु मध्ये तमोरले छोएका वडाहरु व्डा नंं. ३,४ र ५ का सुख्खा ग्रस्त क्षेत्रमा चरम खानेपानिको अभावले बसाई सर्ने बाध्यात्मक परिस्थीतिको परिवेषमा आज तेलिया खानेपानी योजना,पहरे खानेपानी योजना संचालन भई तत्काल खानेपानी आपुर्ति भई रहेको र वडा नंं.५ र ६ को हकमा ढाडखोला खानेपानी योजना संचालनको क्रममा रहेको र अन्य खानेपानि योजनाको ब्यावस्थापन गर्ने योजना रहेको साथै विवाह,ब्रतबन्ध,सुध्याई,लगायतको सामाजिक सामुहिक कार्यमा निशुल्क गाउपालिका बाट ५ हजार लिटर पानि टयांकर मार्फत सेवा दिने कार्य थालनी भएको छ ।